လေ့လာစရာ idioms - Myanmar Network
Posted by Khine Han Ni Myint@scarlet annie on November 2, 2010 at 16:48 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
What is idioms?
Idioms isagroup of words used together withameaning that you cannot guess from the meaning of the separate words.
စကားလုံးတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီရဲ့ အနက်အဓိပ္ပယ်ကို ကောက်ယူထွက်ဆိုလို့မရပဲ စကားလုံးတွေကို စုပေါင်းပြီးမှ ထူးဆန်းတဲ့ အနက်အဓိပ္ပယ် ထွက်ပေါ်လာတာမျိုးကို အီဒီယံ ဟုခေါ်သည်။
အောက်ပါ အီဒီယံ တချို့ကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့
what goes around, comes around- သင်ပြုသမျှ ကံ သင့်ထံပြန်
a little bird told me-ဗိုက်ထဲမှာ ပုဏ္ဏားလေးရှိတယ်
an eye for an eye,atooth foratooth- ဘဲစားဘဲချေ
actions speak louder than words- အပြောကတော့ ရွှေမန်း။ အလုပ်ကတော့ ချိုမိုင်မိုင်
all roads lead to Rome- ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲ
birds ofafeather flock together- အသွင်တူ အိမ်သူဖြစ်
go dutch- ကိုယ့်စရိတ် ကိုယ်ရှင်း
kill time- အချိန်ဖြုန်းသည်
keep one's word- ဂတိတည်သည်
know someone by sight- နာမည်ကို သိနေ။ ကြားဖူးနေတယ်။ မျက်နှာကိုတော့ တန်းမိနေ။ မှန်းမိနေတယ်
a ladies' man- ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်
a lady killer- မြှာပွေသူ
Ref: ဦးအဂ္ဂ (တောင်ငူ)
အားလုံးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မည်ဟု့ မျှော်လင့်လျက်
idioms.jpg, 11 KB
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on November 21, 2010 at 16:14
Action speaks louder than words --> ကို
အောက်ပါ website များရဲ့ရှင်းလင်းချက်နှင့်တိုက်ကြည့်ကာ ဒီလိုဘာသာပြန်ရင်ပိုသင့်လျှော်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။
--> ``အပြောမဟုတ်၊ အလုပ်နှင့်သက်သေတည်``
Idiom Definitions for 'Actions speak louder than words'